Indonesia in Focus: Toerana fizahan-tany amin'ny toerana tena izao tontolo izao.
Toerana fizahan-tany amin'ny toerana tena izao tontolo izao.
Ny mitaingina Tsy vita (379)
(Fizarana telon-jato sy fito-polo sivy), Depok, West Java, Indonezia, Septambra 6, 2015, 1:40 PM).
Tany am-piandohan'ny 1982, rehefa avy niala toy ny mpiasam-panjakana tao amin'ny Tale Jeneraly ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony Fampianarana sy ny Kolontsaina, ny fotoana voalohany mitsidika na lavitra any ivelany, satria tiany ny sekoly ao amin'ny California State University, Fresno, California.
Nanatitra ny raiko sy ny reniko sy ny sivy rahalahy sy anabavy raha izaho, dia Halim Perdana Kusuma International Airport, raha ny Indonezia tsy manana ny Soekarno-Hatta seranam-piaramanidina. Rehefa niakatra ny fiaramanidina ny Japana Airlines (JAL) Jumbo 747, iray lehibe roa-anivon'ny fiaramanidina, lalana nijanona vetivety tao Changi Airport, Singapore sy Narita Airport, Tokyo, alohan'ny hanohizany mankany San Francisco Tokyo sidina. Avy San Francisco dia niakatra ny fiaramanidina ho any an-tanànan'i Fresno Air California. Amin'ny seranam-piaramanidina Fresno, Izaho efa naka ny nitaiza ray aman-dreny Bob foto-kazo sy ny vadiny (Dee) satria velona Aho izany fianakaviana nandritra ny volana maromaro, talohan'ny nifindra tany amin'ny trano dia mifanila ny Masjid Fresno, izay no misy afa-tsy 50 metatra miala ny toeram-pianarana ny California State University, Fresno.
Mazava Indonezia (Jakarta), rehefa tsy maoderina tahaka ny ankehitriny, tsy firy no Malls (faran'izay tsena), dia tsy misy lalana isan'ny, ka rehefa nijanona tao fitaterana amin'ny Changi Airport fiovana fiaramanidina JAL ny hafa, na ihany adiny telo, dia mampiasa manodidina ny seranam-piaramanidina Changi , Rehefa Changi seranam-piaramanidina ny ankehitriny efa, misy fomba mandeha, vatany fiaramanidina tohatra sy ny fiantsenana be olona na be manahirana feno vokatra isan-karazany izay tsy nanana Halim Perdana Kusuma.
Nahafinaritra aho kecanggigan sy ny fiandohan'ny maoderina an'i Changi seranam-piaramanidina, Tiako ny ho avy avy any amin'ny tanàna lehibe (Jakarta), mankany an-tanàna tahaka an'i Singapore fanjakana. Dia nitodi-doha ho any Tokyo avy any Singapore, kisendrasendra ny vaovao no handeha amin'ny fiaramanidina, vahiny rehetra izay Transit any Tokyo, dia nomena maimaim-poana ny visa ho nitsidika Japana nandritra ny telo andro. Peumpang tsirairay JAL mankany amin'ny firenena vahiny sy ny fandalovana tany Tokyo, nomena ny toerana JAL mijanona maimaim-poana nandritra ny telo andro tao amin'ny Hotel Nikko Narita.
I mampiasa izany fahafahana hitsidika trano mpizahatany isan-karazany tao an-tanànan'i Tokyo. Ary rehefa tafatody tany Narita voalohany seranam-piaramanidina no niditra ny lohataona, izay fotsiny mitsitaitaika ririnina, eto tsapako ny fahatsapana ny mangatsiaka (hatsiaka) tamin'ny fitoerana aloha teo amin'ny ririnina firenena tahaka an'i Japana. Avy Narita seranam-piaramanidina izahay, Nandray mivezivezy fiara fitateram-bahoaka majors tanàna Tokyo (maraina tanàna), mandra-maraina tanàna tanànan'i Tokyo, izahay ny fisoratam ao amin'ny Travel sampan-draharaha eo an-toerana, izay nitondra antsika hijery ny isan-karazany mpizaha tany manintona any Tokyo, miainga amin'ny fiakaran'ny NHK Tower, mitaingina sambo fitetezam-paritra ny ony izay mizara ny tanànan'i Tokyo, izay ny asa tanana ny fanaovana solon-perla, ny Japoney ny lapan'ny Mpanjaka, izay Warung dite, ary toerana falehan'ny mpizaha tany hafa. Dia tena miaiky avy any Tokyo (ankehitriny manana mponina 40 tapitrisa, ny harato indray mandeha, ary koa ny tanàna hafa aho hatramin'izay nitsidika toy ny Osaka. Avy Osaka ho any Tokyo antsika haingana fiarandalamby mitaingina. Tokyo na dia be mponina, dia mahalana vao tojo fitohanana teny an-dalana (fifamoivoizana Jam) , angamba satria Tokyo efa manana rafitra raitra fitateram-bahoaka, manomboka amin'ny metro (Sub lalana), monorail lamasinina sy ny fitateram-bahoaka hafa trano tsara sy voalamina tsara ny fifamoivoizana.
Hizaha tany hafa aho, nanao dia lavitra an-tsisiny ny vanin-taona mafana, matetika campus tamin'ny volana Jona (fahavaratra) Mety ho eny mpianatra, ary ny mpianatra izay te-hanohy oniversite (fohy) koa navela. Unversitas matetika mianatra any Etazonia misy efatra semesters, enim-bolana ny ririnina, lohataona, vanin-taona mafana, ary ny fararano antsasaky ny vanim-potoana. Ao amin'ny vanin-taona mafana enim-bolana tamin'ny 1983, dia manfatkan handeha manodidina Amerika. Tany am-piandohan'ny ny vanin-taona mafana mpianatra aho ny tsy miankina hitchhiked mpianatra avy any Malezia (Hishamuddin), dia nianatra tao Fresno ny lany fa tsy Mara vatsim-pianarana. Avy Fresno ho any San Francisco mba haka telo ora, iray amin'ireo ny maha-tokana ity tanàna ity ny maritrano ao an-trano mponina, nisy voatariky ny Architectural kolontsaina an'i Alemaina, Frantsa, Holandy, Irlandy sy ny kolontsaina ny Eoropeana fiaviana hafa, satria fantatsika ny tanàna mponina ny olona avy maro samy hafa kolontsaina ao Eoropa , koa ny Shina (China Town), ny Filipina sy ny firenena maro hafa.
Avy San Francisco no hijery ny California morontsiraka, ho any an-tanànan'i Los Angeles, tokony ho dimy ora, teto amin'ity tanàna ity no ho any Disney Land tonga sy ny toerana fizahan-tany maro hafa. Tsy mbola nahatsapa ho any an-tanànan'i San Diego, eto no afaka nahita Ranomasina World sy ny fizahan-tany an-dranomasina hafa. Volana ka hatramin'ny roa sy ny vanin-taona mafana fahatelo dia niezaka nandeha mampiasa ny fiara fitateram-bahoaka (Grey nanenjika), amin'ny vanim-potoana manan-kery tapakila tapakila roa volana, izay midika fa ny vanim-potoana tapakila izany no afaka manova-fiovana fiara fitateram-bahoaka amin'ny alalan'ny terminal ny fiara fitateram-bahoaka tsy mividy tapakila vaovao. Itineraries isika Fresno ho any Los Angeles, avy any Los Angeles izahay, nitodi-doha ho any Tucson sy ny tanànan 'i Phoenix any Arizona, dia ho any Dallas sy Houston, Texas, any Texas dia nitodi-doha ho any an-tanànan'i El Paso, El Paso izahay, niampita ho any an-tanàna Trijiudad Juarez (Meksika). Avy Texas izahay, nankany Albuqaque, Alabama alohan'ny sasin-tenin'ny Missouri, ka nandeha ho any Virginia, ny tanànan'i Philadelphie, talohan'ny an-tanànan'i New York. Amin'ny tanàna sy ny toerana fizahan-tany ao amin'ny fanjakana isika maka fotoana mba hahita izany, indraindray satria tsy misy fitateram-bahoaka intsony manokana isika kemdaraan ny mpizaha tany toerana (fijirihana).
Tamin'izany andro izany, vahiny mpizaha tany dia mbola avela mananika ny Statue ny Fahafahana ho eo an-dohan'ny ny sarivongana (ankehitriny voarara). Raha mbola teo WTC kambana trano, ny ambony rihana no omena ho an'ny mpizaha tany. Talohan'ny Philadelphia, dia afaka nitsidika Washington DC. Nandritra ny dia lavitra izay aho vao natory teo amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka arau fiara fitateram-bahoaka, avelao fotsiny ny entako ao amin'ny fisoloana akanjo tao, ary toerana fidiovana ity no fandroana amin'ny gara. I handany ny alina (hijanona amin'ny trano fandraisam-bahiny), nanana rehefa tonga tao New York, mijanona ao amin'ny Tanora Hostel iray-folo, pasipaoro sy zava-tsarobidy napetraka teo anoloan'ny Office. Mazava ny efi-trano nipetrahan'ny mpizaha tany tovolahy avy any Frantsa, Alemaina, Meksika sy ireo firenena hafa, (ny fotoana dia vidin'ny $ 3 isaky ny alina hitoetra. Very lafo indrindra rehefa ny tahan'ny fifanakalozana dia $ 1: Rp 500, -
Rehefa tao an-tanànan'i Memfisa trano hitanay izay nanao Elvis Presley Museum. Ao amin'ny Grey nanenjika Bus Tour isika hiala soritry ao amin'ny fanjakana atsimo ho any New York, an-trano Browse fanjakana avaratra, talohan'ny niverenany tany Fresno. Tsy toy ny Etazonia, izay tena malalaka (50 Milaza), raha ny firenena Eoropeana dia somary kely firenena, tahaka ny firenena hatramin'izay aho nitsidika toy ny Holandy, Alemaina, Aotrisy, Hongria, ary Espaina. Ao amin'ity firenena ity no nitsidika tempay manintona maro, toa an'i Berlin, Humburg, Amsterdam, The Hague, Budapest, Vienne, Madrid, Sevilla, ary toerana falehan'ny mpizaha tany hafa toy ny faritra izay ny finoana silamo indray mandeha fanjakana nanjaka tany Espaina sy ny toerana falehan'ny mpizaha tany.
Nandeha ao Etazonia dia samy hafa raha toa ka nampiasa ny fiara fitateram-bahoaka, fa any Eoropa no mampiasa bebe kokoa ny fiaran-dalamby. Raha nandritra ny Etazonia isika, raha te-hihinana kosher sakafo mandeha any amin'ny mpivarotra (Mini tsena) an'ny eo an-toerana Silamo na ny silamo avy any Pakistan, India sy ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, dia any Eoropa ho an'ny Silamo mpizaha tany matetika mitsidika retaurant (trano fisakafoanana) izay mitantana ny ao an-toerana na ny Silamo Miozolomana taranaka Tiorka no be nanitatra teo Eoropa, indrindra fa Alemaina sy Frantsa.
Toerana tena toerana fizahan-tany amin'ny Duna
Vakansy dia tena mahafinaritra tokoa izany, indrindra fa raha mikasa ny mandany ny andro fialan-tsasatra any ivelany. Eny ary eto no hiresaka toerana mahaliana mpizaha tany maneran-tany.
serizy tany maro ny zavatra Trips an'i Japana dia tsy maintsy hahafinaritra. Misy toerana maro ao Japana dia mahaliana sy mendrika ny fitsidihana. Raha mikasa ny haka any, misy tena be ny fitsidihana mpitari-dalana tolotra izay hitarika anao hankafy ny hatsaran-tarehy ny Japana. 1.Ueno Park miaraka amin'ny olo-malaza Japoney serizy voninkazo tena tsara tarehy. Raha te-hankafy ny hatsaran-tarehy ny voninkazo ity, tonga Ueno Park amin'ny lohataona izay nitranga manodidina Martsa ho May. Ueno Park no toerana malaza indrindra sy efa ny toerana nisy an'i Japana tsara indrindra mpizaha tany mba hanao hanami, izany hoe hitsangatsangana raha mankafy ny voninkazo ny voaroy mamelana.
2. Fuji-Q Highland Tourism Japana endrika iray io voly zaridaina izay manompo ny tena mitaingina mampientam-po, ny iray amin'ireo dia iray-roller coaster izay avo dia avo amin'ny lava leha. Ueno Park no toerana malaza indrindra sy efa ny toerana nisy an'i Japana tsara indrindra mpizaha tany mba hanao hanami, izany hoe hitsangatsangana raha mankafy ny voninkazo ny voaroy mamelana.
3. Disney Resort, Tokyo toeram-pilalaovana naorina tao an-tanànan'i Tokyo, maro ireo mitaingina fa afaka mankafy eto, eny azo inoana fa tsy be dia be mitovy amin'ny an'izay ao Dufan Ancol, Jakarta, Indonezia voly atao hoe tsy hisaraka pemaianan Air, Flying, Coster, dia mety ho toerana ihany izay mahatonga azy io ho tian'ny any Japana. Fa raha jerena avy amin'ny anarana hoe "Disney" Toa feno kokoa.
Holandy dia tsy fantatra ny windmill ihany. Holandy dia iray amin'ireo manintona mpizaha tany malaza eo amin'izao tontolo izao. Any no afaka mahatsapa ny fahatoniana ny voajanahary manodidina any an-danitra. Ny olona misy namana be sy tsara. Dia afaka mora foana hahazo ny fialan-tsasatra fanofana trano. Ny fifidianana toy ny fanofana trano fialan-tsasatra, izay manampy anao mba hampihenana ny vola lany ny hitoetra. 1. Volendam Iray amin'ireo manintona mpizaha tany malaza any Holandy dia ny Valendam., Tao no afaka maka sary miaraka amin'ny akanjo 'londo' ala sekoly mpanarato fahiny. Eny, ny lasa Volendam dia tanàna fanjonoana, fa ankehitriny ho iray amin'ireo zavatra manintona mpizaha tany ho an'ny vahiny mitsidika ny Holandy. Volendam Flag Ijsserlmeer manamorona ny Ranomasina Avaratra rano. Raha avy any Amsterdam Schipol Airport iraisam-pirenena no tokony ho 30 km sy avy any an-tanàna mihitsy no tokony ho Amsterdaam 20 km. Volendam am-boalohany ao amin'ny seranan-tsambo faritra Edam, iray famokarana fromazy-tanàna any Holandy. Rehefa manao ny tenany Edam seranana, Volendam tapaka izy avy eo, ary namorona tao amin'ny tanàna fanjonoana Volendam. Rivotra iainana sy ny trano ao Volendam dia tsara tarehy, madio sy tsara foana. Na dia kely sy niara-trano madinika, tena hita maso ny tompon'ny trano dia tsy maintsy manana ho an'ny fikarakarana ny trano sy ny lingkungannnya tsara. Taloha 2. Keukenhof, Lisse Ny iray amin'ireo manintona mpizaha tany any Holandy, izay ihany koa no mendrika mba hitsidika ny Keukenhof, ny hitan'ny javamaniry toy ny saha na zaridaina voninkazo. Zavatra manintona ity iray ity hita tao an-tanànan'i Lisse, Keukenhof no misy ao amin'ny atsimon'i Holandy, izany hoe tao amin'ny tanànan'i Lisse, tokony ho 30 minitra ny fiara fitateram-bahoaka avy any Amsterdam. Park miaraka amin'ny faritra ny 80 hektara eo ho eo, izany ihany koa ny voninkazo lehibe indrindra zaridaina tany Eoropa, ka dia antsoina hoe Ny Garden any Eoropa. Tsy mahagaga, ny Keukenhof dia lasa iray amin'ireo toerana mpizaha tany malaza indrindra any Holandy. Mifototra amin'ny vaovao azoko, isan-doharano fito tapitrisa mahery voninkazo no niteraka mba hisarihana ny mpitsidika. Tsara homarihina fa tsy tulips azo nankafy, fa isan-karazany koa ny voninkazo toy ny hyacinths, daffodils, dia orkide. Maherin'ny 800.000 mpitsidika avy any an-trano sy any ivelany tonga eto amin'ity valan-javaboary isan-taona. Fa tia ny voninkazo sy tia ny sary, 'maintsy' lalàna mba hitsidika Keukenhof. Ary ho azo antoka no hitondra fakan-tsary mba hisambotra ny hatsaran-tarehy ny voninkazo ity zaridaina. 3. Canal Cruise, Amsterdam Amsterdam no nitsidika toerana indrindra any Eoropa amin'ny mpitsidika an-tapitrisany maro, izay tonga mba hijery ilay tanàna tsara tarehy isan-taona. Izany no tena tsara-nikasa tanàna, tamin'ny taonjato faha-17 ny tanàna no ivon'ny ny ara-toekarena sy izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ny antoko renivohitr'i Eoropa. Tsy tena tanàn-dehibe tao an-tanàna rehetra ny tena manintona dia mora idirana an-tongotra. Ity tanàna ity no tonga lafatra mifangaro ny tantara sy ny ankehitriny trano. Ilay tanàna dia mirehareha ny tontolo iainana fandeferana sy liberaly. Raha ara miteny aho tsy manana ny tena tahirin-kevitra, fa ity tanàna ity nihoatra ny tanàn-dehibe any Eoropa any ny isan'ny bisikileta, lakandrano, tetezana, teatra, tsena sns Ny fotoana tsara indrindra mba hitsidika Amsterdam Ny fotoana tsara indrindra mba hitsidika Amsterdam no Jolay sy Aogositra, noho ny rivo-piainana nandritra ny volana no tsara indrindra. Na dia tsy tafahoatra, Amsterdam dia ho an'ny mpitsidika fitodian-tsambo nandritra ny taona. Na dia nitsidika an'i Amsterdam ao amin'ny offseason dia ny hanana ny tombony araka izay ho hitanareo be fihenam-bidy amin'ny fiaramanidina rehetra, hotely sy trano fisakafoanana. Ao Amsterdam dia hahita maromaro fety sy ny fisehoan-javatra mbola hitranga mandritra ny taona. Tany Amsterdam, any Holandy, misy ny fitsidihana teny an-drano fantsona izay tena mahatalanjona ho an'ny mpizaha tany. Tour manasa mpizaha tany mahita ny rivotra iainana ao an-tanànan'i Amsterdam teny an-amoron'ny renirano. Ny anaran 'ny fitetezam-paritra izay Tsy vahiny amin'ny izao no Canal Cruise Amsterdam.
Miverena ny lohahevitry ny lavitra, tamin'ity indray mitoraka ity milaza aminao aho hitan'ny sasany izay tsy maintsy namangy, raha ianao ao amin'ny Fanjakana frantsay. Ny toerana manaraka ireto dia takiana amin'ny fitetezam-paritra avy rehefa mitsidika ao amin'ny frantsay State 1. Ny Tour Eiffel, Paris Mazava ho azy, ny toerana fizahan-tany indrindra voalohany nisarika ny sain'ny olona maro sy maintsy mendrika ny fitsidihana dia ny Tour Eiffel. Satria tsara ity toerana ity an-tapitrisany maro ny mpivady te-hanolotra, mazava ny fitiavana, honeymoon, sns Eiffel Tower koa dia naorina tamin'ny taona 1889 teo anelanelan'ny 1887 sampat mba hankalaza ny taonjato ny Revolisiona Frantsay tamin'ny haavon'ny 275 metatra. Na izany na tsy nyesel deh tonga eto indrindra raha mitondra ny mpiara-miasa 2. Louvre, Paris Louvre lasa nalaza indrindra ny fampirantiana zavakanto rehetra, ary dia an-trano ny zavakanto sy ny tantara tsy afaka handray ny baguette amin'ny. Léonard de Vinci Mona Lisa (La Giaconda) grin tsiky enigmatic, fa ianareo kosa hahita mihoatra ny 35,000 farantsa hafa eto, avy Antiques amin'ny zavakanto maoderina. Bonus tendron'ny ravin: manampy ny piramida maoderina Louvre, ny tarehy ny frantsay voninahitra amin'ny Ejipta Fahiny (ary ampiasaina ho toy ny toerana misy ny de Vinci Code). 3. Lapan'i Versailles, Versailles Moving avy any Paris sy ny anatiny no ahitantsika ny Lapan'i Versailles, an-trano ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy any Frantsa mandra-La Tapahina ireo taratasim-haka ny lohany. Palace mbola ary izany dia fomba tena tsara mba handany andro amin'ny Hall ny fitaratra fizahana, ny asa lehibe sy ny loharano zaridaina ary voahodidin'ny amin'ny tanàna misy ny sasany amin'ireo toeram-pisakafoanana tsara indrindra ao amin'ny faritra (anisan'izany Paris). 4. French Riviera, Cannes sy Monaco Frantsay Riviera dia toerana tena tora-pasika toerana ho an'ny glitterati, ny sasany amin'ireo vahiny indrindra tora-pasika ao amin'izao tontolo izao tohanan'ny sasany tarehy indrindra hotely, fisakafoana fahafahana sy ny fialam-boly fiantsenana mba ho hita na aiza na aiza eto an-tany. Ny andro mafana ary mafana rehefa ririnina amin'ny vanin-taona mafana, nefa tsy tara ny Cannes Film Festival sy ny kintana eny amin'ny horonan-tsary izao tontolo izao raha mbola azo atao.
Ny teny anglisy no tsy malaza noho ny baolina kitra irery ihany. Fa, mazava ho azy, toeram-pivarotana maro ny tantara sy ny toerana mahaliana nitsidika. Raha manana fahafahana ho tonga any amin'ny Angletera, ny sasany amin'ireo toerana sy ny asa mahaliana azo nitsidika. 1. Tilikambon'i Londres Tilikambon'i Londres, miorina ao afovoan'i London dia vakoka ny tantara sy efa nanompo ny fianakavian'ny mpanjaka nandritra ny taonjato maro. Ankoatra ity tilikambo ity koa dia nanompo ho toy ny trano-maizina, trano fitehirizam-piadiana, ary na dia ny Zoo. Ity tilikambo ity ihany koa an-trano ho any amin'ny mpanjaka satro-boninahiny hitanao. Ny tilikambo dia misokatra amin'ny Talata amin'ny alalan'ny Asabotsy manomboka amin'ny 10:00 mba 18:00 an-toerana. Amin'ny saran'ny fidirana ny 17 euros (tokony ho Rp..230 arivo) dia afaka mitsidika ny iray amin'ireo nitsidika toerana maro mpizaha tany izany. 2. Tower Bridge, Londres Ny rafitra sy ny toerana manaitra indrindra tao an-drenivohitra, Tower Bridge tany Londres dia nitsangana teo an-Tamise nanomboka tamin'ny 1894, ary iray amin'ireo toerana manan fantatra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Eto dia afaka mahita ny rafitra sy ny kobany vaovao manazava momba ny teknolojia nampiasaina nandritra ny taona maro mba Tower Bridge hetsika. Afaka mitsidika ity toerana ity isan'andro manomboka amin'ny 10:00 mba 18:30 miaraka amin'ny karama 7 euros (tokony ho Rp.95 arivo). 3. Big Ben tilikambo Big Ben efa ela satria lasa olomangan'ny ao an-tanàna any Londres. Ny famantaranandro lehibe tilikambo any amin'ny faran'ny avaratra ny Lapan'i Westminster any London Izao no fahatelo famantaranandro tilikambo avo indrindra eto amin'izao tontolo izao. Raha toa ianao ka ho any London, dia mety tsy tara ny fahafahana hijery ny famantaranandro nanomboka tamin'ny 31 May ticking 1859 izany. Amin'ny hariva jerena ny 96,3 metatra ny avo dia ho tsara tarehy kokoa noho ny volamena voaravaka jiro mavo ny Lapan'i Westminster. Big Ben no indray mandeha ny lehibe indrindra famantaranandro amin'ny lafiny efatra amin'ilay tilikambo eo amin'izao tontolo izao, fa avy eo dia resy Allen-Bradley Clock Tower any Milwaukee, Wisconsin, Etazonia.
Emirà Arabo Mitambatra manana tanàna malaza roa fanjakana, izany hoe Abu Dhabi sy Dubai. Mpizaha tany tombontsoa nanana ny Dubai, satria niankina tamin'ny varotra Dubai amin'ny asa sy ny fampiasam-bola ho an'ny fitomboana ara-toekarena. Izany no mifanohitra amin'ny Abu Dhabi izay miankina amin'ny varotra solika. Dia eto no nanangona ny lisitry ny sasany amin'ireo tsara indrindra manintona mpizaha tany amin'ny
1. Burj Al Arabo Burj Al Arab dia trano fandraisam-bahiny mihaja miorina ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Burj Al Arab trano, natao ny Tom Wright, mahatratra ny haavon'ny 321 metatra, 66 gorodona ary no avo indrindra tanteraka trano ampiasaina ho toy ny trano fandraisam-bahiny. Ny trano mijoro ao amin'ny iray miorina solon-nosy 280 metatra-dranomasina any amin'ny Hoala Persika. Burj Al Arab no tompon'ny Jumeirah. Ny trano fandraisam-bahiny matetika dia antsoina ho toy ny kintana 7. Dia heverina ny fanoharana avy ireo eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Hita ihany koa izy io ho toy ny fomba "hanefy" ny hafa hotely izay niantso ny hotely kintana 6. 2. Jumeirah Beach Jumeirah Beach no malaza indrindra amoron-dranomasina any Dubai. Io tora-pasika mivelatra hatramin'ny 7 km, nizara ho fito amoron-dranomasina sy ny tora-pasika eny anelanelany lava tsirairay ho an'ny kilaometatra. 2 Beach fused isaky ny Jumeirah Park, ary Wild Wadi. 3. Burj Khalifa Burj Khalifa dia tonga fianarana ho an'ny avo indrindra sy tena manaitra trano. Tilikambo, 153 gorodona avo mikasika ny lanitra tao an-tanànan'i Dubai. Ny trano dia ahitana faritra ny trano fandraisam-bahiny, birao, Residential Apartment amin'ny toerana rehetra ny haitraitra. 4. Palm Jumeirah Palm Jumeirah manana ny zavatra rehetra tokony hahazo ny tsy mampino fialan-tsasatra. Anisan'izany ny anaran 'izao tontolo izao-malaza trano fandraisam-bahiny, toerana mpizaha tany dia mahagaga, lafo vidy lamaody sy ny toeram-pivarotana lehibe. Na ianao te haka aina fotsiny na Miroboka ao anatin ny fety feno ny fialam-boly, izany dia tena manentana ny fanahy toerana nitsidika. Streets Café Mofo voasesika ao Armenia Armenia dia firenena iray izay tsy lavitra avy any amin'ny tany Eoropa sy mba toy izany Torkia. Na dia ny firenena dia tena manam-paharoa, fa toy ny Kristianina voalohany fanjakana eo amin'izao tontolo izao, fa mahatsapa ny firenena dia tsy nahita sakafo any Armenia dia tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny be amin'ny ankapobeny toy ny tany Eoropa. Mofo sy lasopy lovia, na paty ho mora alaina foana. Ny olona eto ihany koa ny tia hihinana voankazo
3. Armenia / Repoblikan'i Armenia
5. dia firenena be tendrombohitra any amin'ny faritra Kaokazy Atsimo Eurasia. Miorina ao amin'ny faritra avaratr'i Azia Andrefana, nanamorona ny Torkia any andrefana, Georgia any avaratra. Armenia dia unitary, maro-antoko, demokratika Birmania:. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-9 ka hatramin'ny taonjato faha-13 ity tanàna ity dia ny renivohitry ny Fanjakana ny mpanompo sampy, ny fanjakana voalohany izay mampiray ny faritra izay ho Myanmar Modern. Nandritra ny taonjato, dia misy maherin'ny 10.000 tempoly sy ny pagodas Yangon fantatra koa amin'ny hoe Antananarivo, dia ny renivohitr'i teo aloha Burma (Myanmar) sy ny renivohitr'i Yangon Region. Yangon no tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena izay misy mponina maherin'ny dimy tapitrisa, ary foibe ara-barotra no agan City anaran'i Ambanja (taloha hoe Mpanompo Sampy) no iray tanàna fahiny (antitra tanàna) hita tao amin'ny faritr'i Mandalay tao Myanmar / Birmania. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-9 ka hatramin'ny taonjato faha-13 ity tanàna ity dia ny renivohitry ny Fanjakana mpanompo sampy,
9. dia firenena izay mponina no maro an'isa fivavahana bodista, fa ao an-tanànan'i Yangon isika dia afaka mahita drehetra mifandray amin'ny fiangonana katolika efa antitra be. Saint Mary ny Katedraly no tranainy fiangonana katolika any amin'ny efitra samy hafa toerana Hotel capsule, izay midika ihany damba ny antonona fotsiny ihany fa matory rebaan dia hita ao amin'ny firenena maro toa an'i Japon, Singapore na Malezia. Ny trano fandraisam-bahiny capsule te-hahita Nightlife
13. be dia be ny toerana! tena be dia be! Ankehitriny te-hahita toerana manapa-kevitra izay karazana fialam-boly? raha te-hahita fialam-boly toy ny alina tsena amin'ny isan-karazany Afaka mahita ny alalan 'ny lahatsary eto ambany ity (ho fanampin' ny sary araka ny voasoritra tao amin'ny lahatsoratra teo aloha), io toerana ao Nelson Street, rehefa fivoahana avy amin'ny MTR gara hisy toromarika mba hivoaka Fitaterana ho any Macao avy Hong Kong Eo foana isan'andro, ary eo foana isaky ny ora, ka tsy mila miahiahy, mandehana mahitsy ho amin'ny latabatra, hividy tapakila, miandry ny ora lasa, dia nankany Makaô. Azo antoka fa tianao ho fantatra ny fomba hahazoana ny Makaô avy any Hong Kong, ny voalohany dia tena mora fanamarihana. Fitaterana ho any Macao avy Hong Kong Eo foana isan'andro, ary eo foana isaky ny Macao Macao na Makaô tanàna dia efa feno ny fialam-boly, izay hita ao amin'ny faritanin'i Guangdong manamorona tany avaratra sy miatrika ny South China Ranomasina. Ny tanàna intsony ny zava-miafina izay ara-dalàna izao tontolo izao miloka Places tsara tarehy indrindra ao amin'ny World Places tsara indrindra ao amin'ny World malaza - tontolo izao dia tena lehibe tokoa tsy sary an-tsaina ny isan'ny mpizaha tany manintona izay azo nitsidika Na izany na tsy firenena eto amin'izao tontolo izao, ary angamba raha te-hitsidika tsirairay maka azo antoka fa ela be, ary na dia avy eo, raha afaka. Rehefa miresaka momba ny toerana fizahan-tany eto amin'izao tontolo izao tokoa dia tena isan-karazany, ary ihany koa dia manana hatsaran-tarehy izay niovaova, saingy misy ny sasany izay mihevitra fa misy ny sasany izay efa miavaka toerana tsara tarehy sy malaza eo amin'izao tontolo izao, fa indray manintona ny mpizaha tany aza Manana hatsaran-tarehy tena mahaliana nefa tsy manana mpitsidika mihoatra maro dia midika hoe tsy tsara fantatra eo imason'ny tontolo izao sa tsy izany?, ary raha manana be dia be ny mpitsidika avy any amin'ny tany azo antoka fa ny toerana no tena malaza tokoa. Eny, eto ny sasany amin'ireo toerana fizahan-tany tsara indrindra vaovao nahazo ny firenena tsirairay araka ny sepengatuhan efa malaza aho mpizaha harambato voasaron-drano eo amin'izao tontolo izao.
17. Kuta Beach Bali no misy ao amin'ny atsimon'i Denpasar, Bali ny renivohitry ny Repoblikan'i Indonezia dia manolotra be tsara tarehy amoron-tsiraka sy tsara fantatra eo imason'ny 'izao tontolo izao.
21. Ilay antsoina hoe Komodo Island dia nahita ny olona maro nosy biby tsy fahita firy no arovan'ny ny toetry ny Repoblikan'i Indonezia. Ao amin'ny nosy Komodo izay hita ao Nosy marina Nusa Tenggara ao amin'ny atsinanan'ny nosy Sumbawa ankoatra ny mankafy ny hatsaran'ny natiora nosy iray dia afaka mankafy ny voajanahary ihany koa ny toerana manodidina ny bibidia izay zara raha hita fa ny dragona. Bromo tendrombohitra mahavariana hatsaran-tarehy ny tendrombohitra izay tompon'ny Tendrombohitra Bromo tokoa mahasarika mpizaha tany an-toerana sy avy any ivelany.
25. azonao hihaona amin'ny Probolinggo, East Java, Indonezia. 2. Japana Tendrombohitra Fuji Fujiyama Tendrombohitra, any amin'ny fari-tanin'i Shizouka sy Yamanashi Prefecture no mahaliana ny nitsidika ihany koa ho an'ny mpizaha tany. Tendrombohitra izay manana toetra any am-parany miaraka amin'ny sosona ny ranomandry izay no tsara indrindra mpizaha harambato voasaron-drano eo amin'izao tontolo izao malaza. Places tsara tarehy indrindra ao amin'ny World Famous
29. A indray mandeha zaridaina tsara tarehy feno voninkazo mampiavaka ny Japana nanao rivo-piainana vaovao ho mpizaha tany, ary azo antoka fa tena mahavariana. Ueno Park dia zaridaina goavana izay hita ao Tokyo Japana ary iray amin'ireo mpizaha malaza harambato voasaron-drano eo amin'izao tontolo izao.
31. 3. Niagara Falls American
33. manana ny riandrano lehibe dia lehibe ho an'ny mpitsidika mahatalanjona hatsaran-tarehy. Riandrano izay no misy eo amin'ny sisin-tany iraisam-pirenena eo amin'ny Etazonia sy Kanada dia malaza toerana fizahan-tany eto amin'izao tontolo izao sy ny mpitsidika maro izay te-hahita ny hatsaran-tarehy ny riandrano dia tena miavaka. Grand Canyon Grand Canyon dia hantsana lehibe noforonin'ny ny Colorado River. Ity toerana fizahan-tany no tena malaza toerana fizahan-tany, ary nitsidika matetika ny mpitsidika avy isan-karazany Negar, satria mahatsapa mahatalanjona voajanahary hatsaran-tarehy dia tsy ho afa-po raha nitsidika manintona ireo indray mandeha ihany. Antilopa Canyon tsara indrindra fizahan-tany tany amin'ny manaraka Amerika no antilopa Canyon, izany andian-tendrombohitra dia mpizaha tany toerana ihany koa tena malaza eo imason 'izao tontolo izao, sy ny hatsaran-tarehy ny mandany jiro tahaka ny masoandro taratra manao trano eo ny ao anatiny dia lasa tena tsara tarehy sy mahafatifaty. Antilopa Canyon dia miorina ao amin'ny Page, Coconino Country, Arizona, Etazonia.
34. 4. Angletera
35. Lake District manintona mpizaha tany any Angletera ity dia tendrombohitra izay manana farihy lehibe, maro ny mpizaha tany izay manintona mpizaha tany tonga toy ny Lake District any Grande Bretagne. Cambridge rivo-piainana mahafinaritra ao Cambridge UK miaraka amin'ny fomba fijery ny renirano sy ny trano fahiny izay mbola tsara foana.
39. Raha ny Thailand misy Resorts maro izay manolotra voajanahary miavaka tsara tarehy sy malaza eto amin'izao tontolo izao iray amin'ireo Koh Chang. Valan-javaboary an-dranomasina Yag dia tena feno olona amin'izao Thailad mpitsidika avy manerana izao tontolo izao, noho ny hatsaran 'ny toerana dia tony sy milamina mba hahatonga ny mpizaha tany hahatsapa ao an-trano tao amin'ny toerana mpizaha tany. Koh Samui in Koh Samui dia mpizaha tany ihany koa ny toerana izay nanintona mpizaha tany vahiny maro indrindra fa mandritra ny vanin-taona mafana, izay azo antoka fa maro mpizaha tany mitsidika ny toerana. Mong Kok no tena tanteraka fiantsenana sy ny mafy
43. Ny nanombohan'ny ny tsenambarotra, miantsena niakatra ho any amin'ny faritra ponenana, nitsidika Mongkok